Imibono Yamakamelo Amancane: Izinto Ezi-3 Okungafanele Ube Nazo - Indlela yokuphila 2022
Imibono Yamakamelo Amancane: Izinto Ezi-3 Okungafanele Ube Nazo
Into ebaluleke kakhulu ekhaya elincane ukusebenza.
Uma ifulethi lilinganiselwe endaweni, lokhu akusho ukuthi kufanele lilinganiselwe ngesitayela. Kubalulekile nje ukuthola ibhalansi efanele. Bona imibono yekamelo elincane.
Elinye lamaphutha ayinhloko abanikazi bamafulethi amancane ukukhetha okungalungile kobukhulu befenisha: kungaba kuncane kakhulu noma kukhulu kakhulu. Lokhu kungalingani kungenza igumbi libukeke lincane kunalokho eliyikho ngempela.
Manje ungenza udonga lokugcizelela ekhaya lakho, "eligcwele" ngokuphelele izithombe, imidwebo, imidwebo. Kodwa uma unesikhala esincane, kungcono ukwenqaba umbono onjalo, ukhetha izindonga ezihlanzekile. Uma ufuna ukunciphisa isikhala ngento ekhanyayo futhi ethakazelisayo, ungakhetha ukuthungwa okungavamile ezindongeni, ukudweba kuzophinde kube usizo, kodwa hhayi ngokweqile.
Izinto ezihlukahlukene ezinhle zokuhlobisa zenza ikhaya lethu likhululeke futhi libe ngabanye, kodwa uma ifulethi lincane, kufanele ulawule inombolo yabo. Ukuchichima kuzokwenza igumbi lizizwe "lisindayo".
Indlela yokulungisa isikhumba sakho emshadweni ukuze umphumela ube muhle ngangokunokwenzeka
Uma ulungiselela kangcono isikhumba sakho emshadweni, imikhiqizo izoba nembe kakhulu futhi ukubukeka kwakho konke kuzoba kuhle kakhulu. Sifunde kuchwepheshe mayelana nokuthi yiziphi izinqubo zokunakekela okufanele zenziwe nokuthi yiziphi okungafanele zenziwe